Samsung Galaxy S I9000 ကို Android 4.1.1 JellyBean (C-RoM BeaN custom ROM) သို့မြှင့်တင်နည်း – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
Smart Cover v3.3.1 for android(latest version) IOS Gameတွေ ကို Hack မယ် Handy Album Pro v6.2 APK (20.22MB) Private DIARY v5.9 APK ( 600KB) Royal Envoy (Full) v1.0 Apk Game 123MB Home
Published On: Thu, Aug 23rd, 2012 Android ROM / Android Tutorials / မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ရာ Tutorials | By သက်နိုင်စိုး Samsung Galaxy S I9000 ကို Android 4.1.1 JellyBean (C-RoM BeaN custom ROM) သို့မြှင့်တင်နည်း
Samsung Galaxy S ကို Android 4.1.1 JellyBean သို့ version မြှင့်ချင်သူတွေအတွက် Android 4.1.1 JellyBean (C-RoM BeaN custom ROM) သို့မြှင့်တင်နည်း ကိုတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။ Samsung Galaxy S အတွက် Official JellyBean update မထွက်တာကြောင့် Android 4.1.1 JellyBean (C-RoM BeaN custom ROM) ကိုသုံးပြီး Android 4.1.1 သို့ version မြှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက် ဖုန်းက root လုပ်ပြီးဖြစ်ရပါမယ်။
4.1.1 version မြှင့်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်နှစ်ခုကိုအောက်မှာအရင် download လုပ်ပါ။
Android 4.1.1 JellyBean (C-RoM BeaN custom ROM) for Samsung Galaxy S I9000 အားရယူရန်
Google Apps ဖိုင်အားရယူရန်
- ဖိုင်နှစ်ခုလုံးကို download လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ကို USB ကြိုးဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီး အခု download လုပ်ထားတဲ့ဖိုင်နှစ်ခုလုံးကို ဖုန်းရဲ့ SD Card ထဲကိုထည့်ထားပါ။ ပြီးရင်ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာကို ချိတ်ဆက်ထားတာကိုဖြုတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်လိုက်ပါ။
- ပြီးရင်ဖုန်းရဲ့ Recovery Mode ထဲကိုဝင်ရပါမယ်။ ဖုန်းရဲ့ Volume Up (အသံကျယ်ခလုတ်) + Home ခလုတ် + ပါဝါ ခလုတ် အဲဒီခလုတ်သုံးခုကိုတစ်ပြိုင်တည်းတွဲနှိပ်ထားပါ။ အောက်ပုံထဲကအတိုင်း Recover Mode ထဲကိုရောက်သွားတော့မှ ခလုတ်များကိုလွှတ်လိုက်ပါ။
-ပုံထဲကအတိုင်းပဲ Wipe Data/factor reset ကိုရွေးပြီး ဖုန်းကို factory reset ချလိုက်ပါ။
-ပြီးရင် apply sdcard:update.zip ထဲကိုဝင်ပါ။ ပြီးရင်ခုနက ဖုန်းထဲကိုထည့်ထားတဲ့ Android 4.1.1 JellyBean ဖိုင်ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ဖုန်းမှာစပြီး Android 4.1 jellyBean (C-RoM BeaN custom ROM) ကိုစတင် install လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
- install လုပ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင် apply sdcard:update.zip ထဲကိုထပ်ဝင်ပါ။ ပြီးရင်ခုနက ဖုန်းထဲကိုထည့်ထားတဲ့ Google Apps ဖိုင်ကိုရွေးပေးပြီး install လိုက်ပါ။
- ပြီးရင် reboot system now ကိုရွေးပေးပြီး ဖုန်းကို restart ချလိုက်ပါ။
- ပြန်တက်လာပြီဆိုရင်တော့ Samsung Galaxy S I9000 ဟာ Android 4.1.1 JellyBean (C-RoM BeaN custom ROM) ဖြင့်လန်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
4 comments on “Samsung Galaxy S I9000 ကို Android 4.1.1 JellyBean (C-RoM BeaN custom ROM) သို့မြှင့်တင်နည်း”	ပြည်ကျော် on December 11, 2012 at 3:43 am said:
Samsung S i9000 official firewar odin နဲ.ရေးလို.ရတဲ. ဟာလေးရှိရင် တင်ပေးပါဦးဗျ။
Reply ↓	ွှThant Zin on January 6, 2013 at 4:58 am said:
Error တက်နေပါတယ် အကိုရေ Recovery moodမှာ Install လုပ်တော့ Fail ဖြစ်သွားပါတယ် လုပ်ကြည့်ပါဦးအကို ဖုန်းက Root လဲလုပ်ပီးသားပါ…
Reply ↓	Thet Htar Su Kyi on February 24, 2013 at 1:52 pm said:
recovery mode မှာ apply sdcard:update.zip မပါလို့..ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေလို့ပါ..
Reply ↓	လင်း on March 1, 2013 at 4:26 am said:
galaxy S advance I 9070 ကောတင်လို့ ရလားဗျာ ……..9070 ဖို့ တင်နည်းလေးရေးပေးပါဦးနော်….4.1.2 ထိတင်နည်းလေး ရေးပေးပါဦးဗျာ